Názov domény pre figuríny: Tingatenga Sei Zita reZita
Yakanga yakadzoka mu 1985 apo iyo yekutanga zita reimba yakanyoreswa uye kubvira ipapo, indianeti yakaona kuwedzera kwekutsvaga kwekuita mazita mazita.
Kana iwe usina imwe chete, kana kuti unoda kungotungamira zvishoma table mazita echirongwa, ipapo ramba uchiverenga. Tichagovera tsanangudzo dzekutenga nekunyora ruzivo rutsva rweVatangi!
WHSR inowana mari yekutsvaga kubva kune dzimwe makambani anotaurwa munyaya ino. Zvinotora mamiriyoni akawanda uye mari kuti zvighad zvinak zvakakosha zvakadai – zvinotsigirwa zvikuru.
1 Doména domény Chii chinonzi?
2 Názov domény Mazano
3 Najlepšie generátor doménových mien
3.3 Stanica 3- Zita
3.6 6- Generátor obchodných mien Shandisa
4 Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita reNew Domain?
6 Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga Domain
6.1 Mishumo: Registrátor domény Cloudflare seChita
7.4 1- Nedávny predaj domény Kushandisa
7.5 2 – Kushandisa Online nástroje na oceňovanie domén
8 Gara pane imwe nzvimbo, uye enda kunoshanda
Doména domény Chii chinonzi?
Apo iwe unoda kutanga webhusaiti, iwe unoda kuva nezita renzvimbo. Asi chii chinonzi sakra iri zita rechizinda?
Iko chaizvoizvo tambo yemashoko anozivikanwa ayo, kana akaiswa mubhapiti, anodzorera mushandisi kune we server yako IP.
Kučiť mamwe mazano ezvesayenzi pamusoro pezita rechizinda, ndapota verenga nhungamiro yaJerry.
Názov domény Mazano
Názov vašej domény je vaša identita. Ndizvo vanhu vanokuwana iwe, mazita avatengi vanopfuura kune vamwe.
Chengetai zviduku nyiri kuyeuka (nzvimbo yedu "Web Hosting Tajné tajomstvo odhalené" muenzaniso wakaipa!)
Usatya kugadzira izwi kana kushandisa izwi rakaumbwa (huba – FaceBook, YouTube, Google, LinkedIn)
Nyora uyeenge kakawanda usati watenga (muenzaniso – chenjerera zvikuru kana zita rako rebhizimisi riri "Dickson Web")
* Ongorora: Iwe haudi kľúčové slovo muzita rako rezita kuti ugoita zvakanaka paGoogle mazuva ano. Asi iyo pfungwa yakanaka yekuisa zita rako rezita rakatenderedza musimboti wepazita rako sezvo ichapa vashanyi vekutanga nguva yekukurumidza zano rekuti webhusaiti yako iri nezvei.
Najlepšie generátor doménových mien
Kutumidza webhusaiti kunogona kunge kwakaoma, kunyanya kana uri mutsva kune webhusaiti yose uye chinonzi branding. Uwe kana iwe wakafanana neni, kupovať maawa uchifunga zvekuita zita, kungozoguma nekunyorwa kwezvipenzi.
Doména ichawedzera chimwe chinhu chakasiyana-siyana chekugadzirisa kune zita rako rechirongwa nekupa mazano ekuwedzera. Kushanyirwa: Domainr.com
Stanica 3- Zita
Zita Station rinobudisa mazita asina kutarisana uye uye asina root kľúč. Kushanyirwa: NameStation.com
Tsvakiridzo yeSain Domain isiri nyore kushandisa-injinjini yekutsvaga yekuwana mazita emadzinza aripo. Icho chishandiso chinobatsira vashandi kuwana mazita emadunhu mazita kuburikidza nepakati pakutsvaga mutsara pamwe nemamwe mazita anowanzowanikwa mumazita emumunda. Icho chishandiso chinowanikwa neActattic (kambani iri shure kwe WordPress.com) mu2013. Kushanyirwa: LeanDomainSearch.com
6- Generátor obchodných mien Shandisa
Shopify yeBusiness Name Generator inokubatsira kuti uite mazita ebhizimisi uye chengetedza zita rekuwanikwa. Tanga nekusarudza izwi rinokosha raunoda kuti nzvimbo yako iise, uwe iwa uchawana mazana emazano. Kushanyirwa: Generátor obchodného mena.
Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita reNew Domain?
Chirongwa chekunyora uye yekuvandudza mari inodhura zvakanyanya kubva pakuwedzera kwayo (inozivikanwa seTLD). Mumuenzaniso uyu ne NameCheap, doména .com inodhura 10,98 dolárov / gore uye inovandudza pamutengo mumwe chete. Kune rumwe rutivi, nzvimbo ye.store inodhura $ 4,99 / gore kunyoresa asi 48,88 $ / gore kuti uvandudze.
Saka, usati waenderera müsi uvawanire zita idzva rezita rechirongwa, ndine chokwadi kuti table mubvunzo wakanaka chaizvo waunoda kubvunza. Uye iyo ndeyokuti:
Zvinosuruvarisa, tabuľa zvinwe zvinhu zvakawanda zvinogona kugadzirisa mutengo wezita reimba. Zvimwe zvezvikonzero izvi zvinogona kuva:
Kureba kwezwi kana zvimwe zvinowedzera zvaungada (muenzaniso: kuwedzera ruzivo rwemasimba, kuenda kumagariro emakore akawanda, nezvimwewo)
Kunyange zvazvo zvakaoma kupiuruna pasi kunyanya kuti zita rezino rinogona kudhura sei, iwe unogona kutarisira kubhadhara chero kupi zvieťaziť za $ 20 kusov, zvichienderana nehotera chero ipi zvayo kana mačiatko kúpiť.
Murairo wakanaka wegumbo ndeyekuti jeho rozšírenia domén (.global, .design., .Cheap) inogona kunge yakadhura zvishoma kupfuura yakawanda doménové rozšírenia (.com, .net), sezvo ivo vachangobva kuiswa pamusika .
Zano # 1 – Iwe unogona kuwana yemahara doména kubva kune vamwe vanopa vanopa, kusanganisira InMotion Hosting uye Hostinger. Kukwezva vatengi vatsva, mamwe makambani anotambira anopa mahara mahara nzvimbo kune yavo yekutanga nguva vatengi. Kana uri kuronga webhusaiti kekutanga, unogona kuchengetedza imwe mari nekutambira neaya mawebhusayithi.
Zano # 2 – NameCheap medzihanya kwakasarudzika mwedzi wega wega – iwe unogona kutarisa yavo saiti peji usati watenga idzva domain.
Kuhn zviazať kunzira mbiri idzi asi pakupedzisira, zviditeľniť kwauri kuti iwe unoda here kubhadhara kune anodhura asi achizivikanwa maadha
Kuongorora kana zita rezita rekuwanikwa kuri nyore. Iwe unogona kuita tsvaga kutsvaga neimwe yezita regrriter domain; kana, shandisa Whois tsvakurudzo dzinoita kuti uone kana zita rako rezita rako riripo kana kuti ratorwa.
Umbona kutarisa kana zita renzvimbo iripo rinoshandiswa kuyengerera.
Izba rekutonga rawaka sarudza rakakwana uye wakaratidza kuti rinowanikwa, ikozvino yave nguva yekunyoresa zita rezita pachako.
Nyoresa doména kana iripo.
Apo iwe unyoresa zita remudunhu, zvemashoko ako ehutano nehuwandu hwehuwandu huchave hwakanyatsonzwisiswa NDIANI.
Kana iwe usingadi kuva nemashoko ako ega ari pachena, unogona kusarudza kubvisa zvinyorwa chako pachivande kuitira kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruchengetedzwe kubva kuvanhu vose.
Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga Domain
Mám doménu kunyorská doména unogona. Asi, unoita sei chaizvo?
Registrátori doménPricingWHOIS Privacy
123 nar 11,99 GBP 11,99 GBP 4,99 GBP / gore
Domain.com 9,99 $ / gore 10,99 $ / gore –
Choď oci 12,17 USD / gore 12,17 USD / gore 7,99 $ / gore
kuyengerera 12,99 $ / gore 15,49 dolárov / gore zadarmo
Zita rakaderera 10,69 dolárov / gore 12,88 USD / gore zadarmo
Sieťové riešenia 34,99 $ / gore 32,99 $ / gore 9,99 $ / gore
Doménový registrátor domén nzvimbo dzichakubhadharai mari shoma iyo inowanzosvika pakati na $ 10 – $ 15, ktorý si môžete rezervovať, zdieľať emadunhu epamusoro pakudzingwa achadhura akawanda pakutenga kokutanga.
Dzimba dzinodhura dzinogona kusvika kusvika kune zviuru zvemadhora asi mushure mokudaro, mari yekuvandudza inonyatsodanwa ($ 10 – $ 15 pagore).
Mishumo: Registrátor domény Cloudflare seChita
Cloudflare vaudza mazita avo mazita ehurumende kubhadhara mabasa ane zero mari yekubhadhara uye inopa mitengo yakawanda yeTLD dzakadai se .com, .net, .io ,, atď. purogiramu.
Zvinokwanisika here kutenga zita rezita rega zvakananga kubva kune webhusaiti inovaka kana kukamba makambani?
Vavaki vemawebsite vanoverengeka vanopa mano ekutenga chirongwa mushem mekunge iwe wakasika nzvimbo panzvimbo yavo.
Vamwe vevakanakisisa vekvaka webusaiti nhasi, zvakadai Wix alebo Weebly, ichakupa rusununguko rwemasikirwo emazita egore kana iwe ukanyorera kumapurogiramu avo egore negore.
Mari yekuvandudza, zvisinei, inogona kusiyana zvichienderana nespamberi pachayo neWix kupa $ 14.95 pagore kuti ivandudze apo Weebly inodhura zvishoma kune 19.95 pagore.
Kunyangwe zvingangodaro zvishoma kana zvichienzanisa nekunyora ruzivo iwe pachako, kubatsirwa kwekutenga zita recuda mazita kuburikidza newebsite yevashandisi ndeyokuti iwe unogona nyore kubatanidza webhusaiti yakoudakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak.
Ko kana iwe uchida kutenga chinzvimbo chiri kutotanga kushanda pane?
Tabuľa huwandu hwemasimangita emazita escrow mazano anowanikwa, asi apa panel zvishoma kuti iwe unogona kutarisa: Escrow.com, Sedo, uye BuyDomains.
Ndiko kunosvika kuno. Unogona kushandisa mashekeri ekuita kuti uone mutagesi unoenda zvakanaka. Unonyatsoita sei izvozvo? Heino nzira:
Nyora rekodha pane imwe nzvimbo yebasa rekutsvaga, yaras sarudza maitiro echitengeserano pakati pako nemutengesi, iyo inosanganisira zita rezita (s) uye mutengo wekutengesa.
Iwe unoda kusimbisa pamwe nekambani yekutsvaga kuti umiridzi wezita rezita redu wakatumirwa kwauri. Shandisa NDIANI alebo WHSR Web Host Spy kuti uone kana muridzi wemuzinda wacho avandudzwa kana kwete.
Paunenge uchitsvaga zita rekugara rine mazita, iro rinowanzowanika pamusangano wemarkmarket, vatengesi vega, uye vendesa – iwe uchacherechedza kuti kukosha kwavo kunogona kumira kupi kubva kune madhora mashomanana kusvika kumuswe zvinovanie.
Nzvimbo iyo iripo yakatarisa inowana mutengo wayo inogona kusarudzwa nenhamba yezvinhu zvakadai sekureba, mutauro, mamiriro, uye mazita evanhu. Hapana imwe nzira imwe chete iyo inogona kukupa mutengo wakakwana wokubvunza. Kune nzira, zviazané, kučeravé ballpark kukosha kwezita rezita uye zvinoda zvishoma kutsvakurudza pane yako.
1- Nedávny predaj domény Kushandisa
Murairo wakanaka wegunwe kuti unzwisise kuti maitiro anokoshesa ndezvekutarisa kutengeswa kwechangobva kuitwa. Kutarisa kutengesa kwemazuva áno kunogona kukupa pfungwa yekuti madhii ari kutengwa uye kuti ndeapi.
DNJournal uverejňuje správu o doméne s doménou. Izvo zvavanogara vachidzokorora uye mairi, vanonyora mazita mazita avo achangobva kutengeswa kubva kune viac prémiových doménových služieb. Paunotarisa kuburikidza, tarisa kune mazita echirongwa chemashoko, urefu, zvfu im im im ak ak ak ak ak ak ak ak w w rek rek ud ud ud ud ud ud.
Prehľad predaja predaja domén Rakabudiswa paDN Journal (máj 2018)
Screenshot yaDN Report predaja predaja domény.
2 – Kushandisa Online nástroje na oceňovanie domén
Obrázok ukážky doplnku chiremera chemuzinda ndiyo kuburikidza nedunhu rekuongorora maitiro kana shanduro yekuongorora yekutsvaga. Aya masayiti achakubvumira kupinda mune rimwe zita recuda uye achakupa mutengo unobvunzwa.
Mamwe mashomanana aunogona kutarisa ndeawo Estibot, WebsiteOutlook, Uye URL Posúdenie.
Aya masayiti anoona kukosha kwemasimusi achishandisa SEO-zvine chokuita nezvinhu zvakadai sekutsvaga, kľúčové slová, poradie Alexa, mwedzi wekutsvaga, nhamba yekutsvaga, uye mari inoshandiswa panel imwechete.
Zvakare, hapana marongerwo emitengo ekutenga zita rezita uye iwe unogona kutarisira kuti vashandurwe kakawanda. Kana iwe uchida pfungwa yakawanda yezita rematunhu mazita, unogona kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai Afternic alebo Tenga Mazita kuti uwane manzwiro emari.
Gara pane imwe nzvimbo, uye enda kunoshanda
Paríž zviňať, utekať z ruiny, rwakakwana kuti ubatsire kunyoresa mazita echirongwa chetsika yebasa rako kana bhizimisi iwe pachako.
Zvingave zviri kuburikidza newebsite vavakiki kana kuti registrátor domény, kupiwa zita rezita rinofanira kuva chinhu chokutanga chamunopedza musati maenda kurarama. Kana uchinge watora izvozvo pasi, inguva yekufungisisa achivaka website yako.
ชื่อโดเมนสำหรับ Dummies: Tingatenga Sei Zita reZita